"Dhibanuhu" waa aasaaska dhaqanka reer galbeedka. Isla mar ahaantaana, dhibbanuhu waa qayb ka mid ah nolol maalmeedkeena iyada oo loo marayo warbaahinta iyo doodahayada marka wararka naxdinta leh ay caqabad ku noqdaan oo ay ka careysiiyaan hubannadayada. Si kastaba ha ahaatee, qaabkeeda cilmiyeed waa mid aad u dhow. Kooraskan khadka tooska ah wuxuu ku martiqaadayaa ka qaybgalayaasha in ay fikradda "dhibanaha" u soo bandhigaan aragtiyo kala duwan oo aragtiyo iyo cilmi saynis ah. Koorasku waxa uu soo jeedinayaa, marka hore, in la falanqeeyo iyada oo la raacayo hab-soco-taariikheed-bulsheed qaab-dhismeedka fikradda dhibbanaha kaas oo qeexaya aragtida aan maanta ka haysanno. Marka labaad, koorsadani waxay ka hadlaysaa noocyada kala duwan ee dhibbanaha iyada oo laga eegayo dhinaca dembiyada iyo cilmi-nafsiga-daawoyinka-sharciyeedka, arrinta dhaawacyada nafsiga ah iyo machadyada iyo daawaynta si loogu yimaado gargaarka dhibanayaasha.
Waxay bixisaa falanqayn faahfaahsan oo ku saabsan fikradaha iyo fikradaha muhiimka ah ee dhibbanaha. Sidoo kale waa munaasabadda lagu fahmo hababka gargaarka dhibanayaasha ee laga dejiyay wadamada looga hadlo Faransiiska (Belgian, French, Swiss iyo Canadian).
Dhibanayaasha: Hordhac ku saabsan Victimology Diisambar 18, 2021Tranquillus
READ Sidee loo ilaaliyaa heerka wanaagsan ee Ingiriisiga… marka aadan fursad u helin inaad ku hadasho?
horeMadaxda cilmi-baarista, xirfadaha cilmi-baarista
socdaSi kala duwan u maamul ganacsigaaga